Daa'ima argachuun 'biyyoota guddataniif ulaagaa angafaa' ta'uu qorannoon mul'ise - BBC News Afaan Oromoo
Biyyoota guddatan keessatti dubartoonni abbaa warraa dhala barbaadu, kan dhala argachuu hin barbaanne caalaa akka filatan qorannoon ifa godheera.
Qorannoon Yunvarsiitii Siwaansiittii gaggeeffame akka argadhe jedhutti, dubartoonni biyyoota warra aadaa Lixaa keessa jiraatan; kanneen warra biyyoota gara Bahaa keessa jiran caalaa dhiira daa'ima argachuuf fedha qabu abbaa warraa isaanii godhachuu filatu.
Dubartoonniifi dhiironni biyyoota Lixaa akka UK fi Awustiraaliyaa nama ijoollee horachuuf fedha qabanitti heerumuu ykn fuudhuuf akka filatan qorannoon kun dhugoomseera.
Addunyaarra ijoollee caala akkoofi akaakayyuutu baayyata
Magaalaa dhiirri keessatti dhalachuu dide
Yunvarsiitii Siwaansiirraa kan ta'e Dr Andiriiwu Tomaas, akka jedhetti, fedhiin akkasii kun kan uumamuu danda'eef filannoowwan karoora maatii foyyaa'aa jiraachuudha.
Dubartootas ta'e dhiironni ulaagaan gaa'ela nama biraa waliin ijaarrachuuf dursa kennaniif keessaa aadaa lamaan--Lixaafi Bahatti keessatti miidhaginniifi gara-laafummaadha.
Maatiin sanyii moototaa UK ilma argatan
Qorannoon saayintistoota Yunvarsiitii Siwaansiifi dhaabbileen qorannoo biroo waliin gaggeessan kun guutummaa addunyaarratti namoota 2,500 akka saamudaatti filachuun yoo ta'u, nama gaa'ela waliin dhaabbachuuf filatan qabeenyi maallaqaa isaanii walfakkaataa akka ta'u gochuudhaan gaggeeffame.
Bajata isaanii daangessuun namoonni kun akka nama waliin gaa'ela dhaabbtan ulaagaalee akkamiif dursa kennuun akka filatan taasifamaniiru.
Ulaagaaleen filannoo dhirsaa ykn haadha warraa dhiyaatan keessaa gara laafummaa, bifa/miidhagina, maallaqa, ho'a qabaachuu, daa'ima argachuu fedhuu, dandeettii waa uumuu, amantaa, fuudha irratti fuudha kan jedhan keessatti argamu.
Ulaagaa kanaan dubartoonni biyyoota Lixaafi Bahaa lamaanuu ulaagaalee gara laafummaafi bifa/miidhaginaaf dursa kennu.
Daa'ima argachuu fedhuurratti ammoo dubartoonni biyyoota Lixaa warra biyyoota gara Bahaa caalaa ulaagaa dursa kennaniifidha.
Dubartoonni biyyoota Lixaafi Bahaa lamaanuu nama fuudha irratti fuudha barbaaduu dhiisuunis walfakkaatu.
Boqonnaa hojii jaalallee barbaachaaf
Dr Tomaas akka jedhanitti, garaa garummaan kun filannoowwan maatii karoorfachuu aadaa warra Lixaa keessa jiraachuu ta'uu mala jedhan.
"Aadaa biyyoota Lixaa keessatti mala ulfa ittisuutu jira, ulfa baasuudhaafis bilisummaa ni qabaanna," jedhe.
"Waan barbaadne gochuufi dhiisuuf filannoo ni qabna. akka nama biyya Lixaa tokkotti lafumaa kaatee 'Ani dhala argachuu hin barbaadu jechuun ni danda'ama' biyyoota gara Bahaaf garuu saal-qunnamtiif walitti dhufeenya taasisuun wanuma akka uumamaa ta'eetti ilaalamudha."
Aadaawwan hunda keessatti dhiiraafis ta'e dubartootaaf qajeelummaa/gara laafinni dursi kan kennamuuf ta'ullee, miidhaginni qaamaa biyyoota gara Lixaa biratti bakka guddaa qaba.